नीतालाई के मन पर्छ ?
04 Aug 2013 | 19:53pm
नेपालीको प्रिय खाना दाल, भात र तरकारी नै मेरो प्रमुख रोजाइ हो। खसीको मासु पनि मलाई मनपर्छ। खाजाहरूमा मःमः रुचाउँछु। विदेशी खाजामा इन्डियन खाजा दही कडी मनपर्छ। यसको अमिलो चट्का स्वादले मेरो जिब्रो नै रसाइदिन्छ। मलाई मनपर्ने फलफूल आँप, स्ट्रबेरी र सुन्तला हुन्। अनार छ भने फ्रेस जुस बनाएर खान्छु। अरू फलफूल छ भने साना टुक्रा पारेर खान्छु।
घुम्ने क्रममा शान्त वातावरणले ध्यान तान्छ। वरिपरि हिमाल भएको ठाउँ घुम्न मन पराउँछु। सुटिङका क्रममा धेरै ठाउँमा गइरहनुपर्छ। घुमेका ठाउँमध्ये जोमसोम, ओखलढुंगा र पोखरा मलाई मन परेका ठाउँ हुन्। पोखराको बाराही मन्दिर पनि मलाई मनपर्ने ठाउँ हो। कार्य सिलसिलामा मलेसिया, कतारजस्ता बाहिरी मुलुक पनि गएकी छु। विदेशी वातावरणले मलाई उत्ति तान्दैनन्। मलाई नेपाली हावा–पानी नै मनपर्छ।
म प्रायः मेलोडी गीत सुन्न मन पराउँछु। बेला–बेला ट्रेजेडी गीत–संगीत पनि सुन्छु। कस्तो गीत सुन्ने, मुडमा भर पर्छ। अभिनयसँगै नाच्नुपर्ने भएकाले रक गीत पनि सुन्छु। मुड चलेमा जिउ नै उचाल्ने किसिमका रक गीत पनि सुन्दै आनन्द लिन्छु। यस्ता गीतले माइन्ड रिफ्रेस गर्छन्। 'गहिरो गहिरो' बोलको पुरानो गीत मलाई एकदमै मन परेको गीत हो। अहिलेसम्मकै गीतमा यो मेरो उत्कृष्ट गीत हो। मैले धेरैपटक यो गीत गुनगुनाएकी पनि छु। हिन्दी, इङ्लिस भाषाका गीत सुने पनि मलाई नेपाली गीत नै बढी मनपर्छ।
कलाकारको नाताले धेरै फिल्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो उमेरसँग मिलेर हो कि, म प्रायः लभस्टोरी फिल्म हेर्छु। कुनै पनि सन्देशमूलक फिल्मले मेरो ध्यान खिच्छन्। अन्य भाषाका फिल्मभन्दा नेपाली फिल्म नै बढी रुचाउँछु। आफ्नो क्षेत्र नै नेपाल भएकाले समकालीन नेपाली फिल्मको टे्रन्ड बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। राम्रा फिल्महरू हेर्न छुटाउँदिनँ। पछिल्लो समयका फिल्म 'सायद' र 'साँघुरो' मलाई मन परेका फिल्म हुन्। आफैंले अभिनय गरेको फिल्म 'मसान' पनि राम्रो छ। म प्रायः हल गएर नै फिल्म हेर्छु। सुटिङका क्रममा कुनै फिल्म छुट्यो भने घरमै ल्याएर हेर्छु। हलमा जाँदा प्रायः साथीहरू र परिवारसँग जान्छु। फुर्सद छ भने म भाइसँग पनि हल पुग्छु।
मलाई उपन्यास पढ्न मनपर्छ। आफ्नो उमेर मिल्दो लभ स्टोरी पढिरहन्छु। पुस्तकमा मोरालिटी भयो भने झन् रमाइलो हुन्छ। पछिल्लो समयमा हरिवंश दाइको आत्मकथा 'चिना हराएको मान्छे’ पढ्दै छु। पढेका पुस्तकमध्ये तसलिमा नसरिनको 'आइमाईको कुनै देश छैन’ मलाई मन परेको किताब हो। मैले महात्मा गान्धीबारे लेखिएका थुप्रै पुस्तक पनि पढेकी छु। नेपाली साहित्यमा मलाई विज्ञान कथा पढ्न मन लागिरहेको छ।
प्रस्तुति : क्रान्ति पाण्डे
« मुकेश र कल्पना पतिपत्नी ! प्रेमिकासँग आर्यनको जन्मदिन »